विराटनगर र जनकपुरबाट दुईतर्फी एयर रुट दिने सहमति » खबरहरुको एउटै केन्द्र
विराटनगर र जनकपुरबाट दुईतर्फी एयर रुट दिने सहमति
शनिबार, असार २, २०७५ १६:५८ मा प्रकाशित !
काठमाडौं । विरानगर र जनकपुरबाट पनि भारतले नेपाललाई दुईतर्फी एयर रुट दिने भएको छ । शनिबार (आज) सहमतिपत्रमा नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षर भएको छ । दुईपक्षले नेपाललाई नयाँ हवाई रुटहरु दिनेबारे गत बिहीबार र शुक्रवार वर्ता भएको थियो ।
एयरपोर्ट अथोरिटी अफ इन्डिया र नागरिक उड्ययन प्राधिकरणबीच नयाँ हवाई रुटसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि काठमाडौं(जनकपुर र काठामडौं(विराटनगर हवाई रुटलाई दुईतर्फी बनाइने भएकोछ ।
यसो गर्नाले नेपाल भित्रने विमानहरुलाई सिमाराबाटै आउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएकोछ । प्राधिकरणका प्रवक्ता विरेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार अब यसका लागि दुबै पक्षले सुरक्षा मूल्यांकन गरेर नयाँ हवाई रुटको प्रयोग थालिने भएको छ ।
त्यस्तै निजगढ, पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट बाट बढी उचाईमा उड्ने विमानका लागि पश्चिममा महेन्द्रनगर र नेपालगञ्जबाट प्रवेशमार्ग दिने सम्बन्धमा आउँदो सेप्टेम्बरसम्म विस्तृत प्राविधिक अध्ययन मूल्यांकन सम्पन्न गर्ने सहमति भएको पनि प्रवक्ता विरेन्द्र श्रेष्ठले बताएका छन् ।
PREVIOUS POST Previous post: उत्तर कोरियासँग राम्रो सम्वन्ध बनाउँदै गरेका ट्रम्पले चीनसँग व्यापारिक युद्धका लागि गरे अर्काे यस्तो हर्कत
NEXT POST Next post: विश्वकप फुटबल : आज ब्राजिल र स्विटजरल्याण्ड भिड्दै, यस्तो छ खेल तालिका
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शनिबार, असार २, २०७५ १६:५८
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शनिबार, असार २, २०७५ १६:५८
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शनिबार, असार २, २०७५ १६:५८
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शनिबार, असार २, २०७५ १६:५८
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शनिबार, असार २, २०७५ १६:५८